Ogaden News Agency (ONA) – Hawl-wadeenada jaaliyada Edmonton oo afur hawleed isugu yimid
Hawl-wadeenada jaaliyada Edmonton oo afur hawleed isugu yimid
Posted by ONA Admin	/ July 22, 2013
Waxaa afur isugu yimid hawlwadeenada jaaliyada magaalada Edmonton, halkaasoo ay arimaha jaaliyadda iyo hawlaha Bisha Ramadaan laga sugayo inay fuliso jaaliyadda ay kaga arinsanayee. Ugu horeyn Gudoomiyaha jaaliyada mudane Ismaaciil C/laahi ayaa ka warbixiyey kulankan iyo ujeedadiisii taasoo uu ku tilmaamay sidii aynu uga faa’iidaysan lahayn khayrka faraha badan ee ku jira bisha ramadaan, wuxuuna carabka ku dhuftay sidii loogu hawl geli lahaa agoonta iyo bugtada shacabka Somalida Ogaadeeniya ee ku sugan xeryaha qaxootiga Kenya.
Isuduwaha jaaliyadaha Canada Yuusuf Ismaaciil ayaa ka soo jeediyey hadal aad u qiimo oo dhinacyo badan taabanayey isagoo yidhi; waxaa loo baahan yahay in aynu horey uga sii socono meesha aynu taaganyahay inagoo ilaalinayna nidaamka iyo xeerka JWXO kaasoo inoo horseedaya in aynu gaadhno ujeedada fog ee aynu leenahay ee ah xornimo taam ah.
Waxaa lagu soo dhaweeyey hadalka mudane sare oo ka tirsan JWXO ahna madaxa Hay’ada Hanti-dhawrka halgame Maxamed Macalin Axmed oo sheegay inuu aad ugu faraxsanahay ka soo qaybgalka munaasabada afurka oo ah buu yidhi mid loo baahanyahay in marwalba la qabato kulamadan oo kale. Wuxuu kaloo yidhi; waxaan halkan uga mahadcelinayaa xubnaha jaaliyada magaalada Edmonton iyo madaxdooda sida fiican oy uga qayb qaadatay mudaharaadkii lagu sameeyey wafdi ku sheegii ka socotay gumaysiga Itobiya iyo guusha taariikhiga ah ee aad usoo hoyseen halgankeena hubaysan ee JWXO ay hormoodka ka tahay.
Hawlwadeenadu waxay goobta ku qodabeeyeen hawlihii u yaalay waxayna sameeyeen shaqo qaybsi taas oo lagu tilmaami karo in munaasabadii afurku uu guul ugu soo dhamaaday.